पेट्रोल कसरी सुरक्षित गर्न? मोटर चालकहरुलाई सुझाव
व्यक्तिगत परिवहन को संचालन मा ऊर्जा बचत लामो मोटर वाहन उद्योग को विकास मा मुख्य निर्देशन को एक constituted छ। वैकल्पिक इन्धन स्रोतहरू मा चलिरहेको परिमार्जनहरू को सान्दर्भिकता ध्यान दिनुहोस् यसलाई Suffice। तर, सबै क्षेत्रहरु बिजुली कार र संकर मोडेल प्रयोग गर्न पूर्वाधार छैन। तदनुसार, मेशिन को सञ्चालन समयमा कसरी इन्धन बचत गर्न को प्रश्न त्यहाँ रहनेछ। उत्तर धेरै छन्, र कार उत्साही को एक विशेष प्रकार तिनीहरूलाई प्रत्येक उपयुक्त। अब यसलाई विस्तार तिनीहरूलाई विचार गर्न आवश्यक छ।
आर्थिक ड्राइभिङ लागि प्राविधिक तयारी
आधारभूत कदम सुरु गर्नुपर्छ इन्धन खपत को अनुकूलन लागि लड्न। तपाईं निदान प्रणाली एक प्रकारको प्रदर्शन गर्नुपर्छ, पेट्रोल इन्जिन को खपत लागि जिम्मेवार छन्। यी गतिविधिहरु दुई प्रकार मा विभाजित गर्न सकिन्छ - यो मेकानिक्स र इलेक्ट्रोनिक प्रणाली जाँच गर्नुहोस्। पहिलो भाग राज्य रसद, शक्ति बोट को शुल्क अनुमान गरिएको छ। पेट्रोल कार कसरी सुरक्षित गर्न को प्रश्न मा, मुख्य प्रतिक्रिया हावा फिल्टर गुणस्तर हुनेछ। यो आवश्यक छ भने, प्रतिस्थापन साफ र, हुनुपर्छ। च्यानल को भरा राज्य किनभने बढ्तै धनी मिश्रण गठन गरिएको छ के को कम हावा पहुंचाता। अदक्ष दहन को फलस्वरूप दखल गर्नू पेट्रोल पछि हुन्छ। अर्को, तपाईंको ई-प्रणाली, इन्जिन नियन्त्रण सेन्सर को जो वास्तवमा, र ट्रयाक प्रदर्शन जाँच गर्नुहोस्। निदान सिस्टम विशिष्ट कार मोडेल को आवश्यकताहरू पूरा, वा प्रणाली आदर्श हुनेछ नै लागत overruns प्राप्त गर्न एक जोखिम छ हुनुपर्छ।
कसरी सुरक्षित गर्न ट्रयाकको मा इन्धन?
आफूलाई द्वारा बाटोमा ट्राफिक अवस्था छिटो चलाउनु कार मालिक प्रकुपित। तथापि, स्पोर्टी ड्राइभिङ शैली इन्धन अर्थव्यवस्था को अवधारणा विपरीत छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, मिसिन को सबै भन्दा को 120 मी / घन्टा को मार्क लागि भोक मा वृद्धि देखाउँछ। केही अवस्थामा, यो पल्ट मा 90 मी / घन्टा खडा। पनि ड्राइभ समयमा तिनीहरूले कोलाहल सिर्जना रूपमा Windows खोल्न र वायुगतिकीय कम छैन मनमोहक छ। यहाँ टिप्पण एक विपरीत उदाहरण पहिले नै aerodynamic दक्षता बढ्दै छ लायक छ। धेरै अनुभवी मोटर चालकहरुलाई वैन लागि जाने सल्लाह छन् - अगाडि हावा फ्लो को कमी प्रतिरोध कम र अप गर्न 3% को खपत बचाउँछ। तर यो सुरक्षा आवश्यकताहरु, दौड को उत्सव मा व्यक्त गरिएको छ जो बारेमा भूल छैन महत्त्वपूर्ण छ। यसबाहेक यो ट्रक को निकास विशेषता, कार तिर निर्देशित गरिनेछ जसको लागि तयार गर्न आवश्यक छ।
के गियरबक्सलाई थप आर्थिक?
तुरुन्तै उल्लेख गर्नुपर्छ कि परम्परागत मार्गदर्शन गियरबक्सलाई "स्वचालित" भन्दा बढी आर्थिक। यांत्रिक एकाइहरु स्वयं अधिकतम गियर चयन गर्न अनुमति र क्रमबद्धमा को बस कौशल खपत को अनुकूलन को स्तर मा निर्भर गर्दछ। यो आफ्नो इष्टतम लोड परे छ जो प्रसारण शक्ति, पकड छैन सिफारिस गरिएको छ। तर कसरी "संयन्त्र" brute-शक्ति मार्गदर्शन प्रसारण मा इन्धन बचत गर्न को प्रश्नको जवाफ सीमित छैन। यदि सम्भव छ भने, यो एक कम गियर देखि हेरविचार खोजी र न्यूनतम औसत गति सेट गर्न मनमोहक छ। बढती गतिशीलता संग ऊर्जा खपत को डिग्री कम गर्नेछ। तर यहाँ यो आफ्नो ब्यालेन्स पानाहरू राख्न महत्त्वपूर्ण छ। पहिले, हामी उल्लेख गति सीमा बारे बिर्सनु हुँदैन। दोश्रो, धेरै उच्च गियर स्विच गर्न आवश्यक बिना लायक छ। को CVT गियरबक्सलाई गर्न सबैभन्दा लाभदायक छन् कि स्वचालित प्रणाली को लागि रूपमा। स्वतः स्वाभाविक मिसिन को वर्तमान आवश्यकता यसलाई समायोजन, को टोक समायोजित हुन्छ।
पाङ्ग्रा को अर्थव्यवस्था
पाङ्ग्रा सायद एक कार को सबै भन्दा महत्वपूर्ण घटक हो, अन्ततः ऊर्जा उत्पन्न जो काम प्रसारित छ। फलस्वरूप, एक आर्थिक कार मालिकले नै टायर मा बोझ कम छ। यस को लागि यो सानो व्यास को पाङ्ग्रा स्थापना गर्न पहिलो आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, यदि एक लेबलिंग R16 छ, यो उचित प्रारूप R14 यसलाई परिवर्तन गर्न छ। यो रूप, को पाठ्यक्रम, गुमाउन, तर पेट्रोल कम फाइदाको लागत स्पष्ट हुनेछ। यहाँ ल्याउन र कसरी राम्ररी देखावटी टायर को खर्च मा इन्धन बचत गर्न सल्लाह लायक छ। यो पक्षमा पनि, उपाय संग, पम्प्ड पाङ्ग्रा यसको कमियां दिन देखि चल्नै पर्छ। इष्टतम समाधान निर्माताको सिफारिसहरू अनुसार टायर मा दबाव, तर अधिकतम प्लेट कायम गर्न हुनेछ।
आर्थिक खपत लागि विशेष उपकरणहरू
मोटर वाहन बजार शाब्दिक artificially इन्धन खपत कम गर्न डिजाइन गर्दै छन् विभिन्न माध्यम संग संतृप्त छ। एक तूफान प्रभाव स्थापना मार्फत प्रणाली र हावा आपूर्ति मा एकीकृत छन् यो तथाकथित इन्धन सेभर पेट्रोल बचाउँछ। उपकरण एकदम सरल छ र सबै भन्दा अक्सर हावा परिसंचरण बनाउनको लागि विशेष ब्लेड संग एक धातु तत्व हो। तर, यस्तो उपकरणहरू को प्रभावकारिता बारे राय मिश्रित छन्। एक हात मा, त्यहाँ इन्धन खपत को असली अनुकूलन संकेत मालिक प्रमाण छ। अर्कोतर्फ, हासिल छ यो प्रभाव एक निर्वात, र कार को क्षमता कम हो। यो इन्धन अर्थव्यवस्था शक्ति redistributes जो मिसिन शक्ति क्षमता, नियन्त्रण एक प्रकारको बाहिर जान्छ।
कसरी पेट्रोल इंजेक्टर मा सुरक्षित गर्न?
वाहन को सञ्चालनको प्रक्रिया मा सुरक्षित गर्न सबै भन्दा साधारण तरिका को एक तटस्थ गियर को सक्रिय प्रयोग हो। तर एक इंजेक्टर को मामला मा, यो विधि छैन प्रभावकारी हुन्छ। तर काम गति सीमा र चिल्लो ब्रेक लगान accelerations को सही समायोजन सहित एकदम चलनअनुसारको र परम्परागत प्रचलन छ। कसरी बाटोमा इन्धन बचत गर्न विश्वव्यापी तरिका पनि छ। यो ड्राइभर कम गियरबक्सलाई र ब्रेक कसरी प्रयोग गर्ने छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित। ट्राफिक जाम संग अवस्था मा चालक व्यवहार याद गर्नुहोस् पर्याप्त - यस्तो ऊर्जा खपत धेरै आवश्यक रूपमा मोड बीच संक्रमण ड्राइव।
बचत गर्न अन्य तरिका
मात्र कार र इन्जिन गियरबक्सलाई एक मंच रूपमा छलफल गरिनु पर्छ हेरफेर जो इन्धन खपत को एक वास्तविक अनुकूलन गर्नेछ। पेट्रोल को कुल रकम एक धेरै प्रतिशत बन्द लागत सही मार्ग चयन गर्न भने छुट कार्ड र यति मा संग बेवास्ता छैन सुझावहरू ग्याँस नेटवर्क जस्तो देखिने सानो विवरण लागि पनि अनावश्यक खर्च आफैलाई छुटकारा गर्न अनुमति दिन्छ फेंक गर्न सक्नुहुन्छ। डी लेखा। उदाहरणका लागि, तपाईं जब कि त मौसम मा ड्राइभिङ कसरी इन्धन बचत गर्न को प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। यो हिउँ र puddles इन्धन ऊर्जा ठूलो प्रवाह आवश्यक भएको गति स्थिरता असर र यसरी ज्ञात छ। एउटै कुरा मा प्रवाह भएको निधारमा सही हुँदा एक आँधी दिन हुन्छ।
इन्धन अर्थव्यवस्था लागि खोज, नियम, सकारात्मक परिणाम, वाहन को संचालन मा लगानी कम गर्न अनुमति दिन्छ। तर यो पूर्ण वैध हुन् यद्यपि, माथि सिफारिसहरू को धेरै विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ, तर कुनै परिस्थितिमा सुरक्षा को स्तर कम गर्न सक्छ। तसर्थ, उदाहरणका लागि, हेरविचार इन्जिन र यांत्रिक इन्धन सेभर लागि विभिन्न additives प्रयोग गर्न, र अधिकतम ड्राइभिङ मोड को खोज मा गियरबक्सलाई को बारम्बार स्विच दुरुपयोग लग्नु गर्नुपर्छ।
को 2114 मा टायर को आकार कसरी चयन गर्न
2110 मा हेडलाइट्स कसरी चयन गर्न
इन्जिन तेल ZIC 5W-30: समीक्षा विशेषताहरु
छोडपत्र लागि कहाँ लागू गर्न, र के कागजात आवश्यक
मोबाइल हावा वातानुकूलित बिना - सुन्दर जेनेरेटर
सब्जियों संग पकाया हुआ भेड़ - व्यंजनहरु
को सहिजन को जीव लागि उपयोगी। सहिजन को उपयोगी गुणहरू
यरूशलेममा जैतून को माउन्ट: मुख्य shrines र चासो स्थानहरू